Ndakasejusa Tindo ndokubva akandikwesha ndikapa kutenda! Part 1 - Page 3 of 3 - Masasi eHarare
Mukomana akandikwesha ndikapa kutenda. Ndakamboedza kusvoverera ruoko pamachende ake ndokuapuruzira ndichifunga kuti angatunde but hazvina kubatsira. Zvakatowedzera hukasha hwaaive nahwo. Ndakafunga vese vandaimborumbidza but vakasara pasi. Ndakafunga John aive aine jendekufa aitunda kusvika huronyo hwaerera kusvika kumakumbo achirikungotunda chete. Apa aisakwana. Ndikafungazve baba vepanext door vaifarira missionary but vaisasvika. Tindo aikarotunda shuga. Mirai tione. Ndichikweshwa kudai ndakatanga kunakirwa zvekurasika pfungwa, makumbo akabatwa nechiveve nekuva weak.
Brother Tindo vanenge vakazviona kuti vandisakadza ndokubva vandibvisa patable ndokundirarisa pafloor chaipo. Ndipo pandakazoipihwa yese. Akasimudza makumbo angu ndokuapeta mabvi achienda pamazamu ndokuizamurira muchipoto cherudo. Maoko ake aive akapinza zvidya zvangu mukati akabatira mazamu angu kuti asaende kwese kwese nekuda kwekumover kwandaita achindikwesha. Akakoira zvine mutsindo akandipeta kudaro. Aive nemboro yaive yakakura seyedhongi, achikoira setsuro apa akalocker mukati sembwa isingabuditsi kusvika yapedza kutundira mukati.
Aiti kana oiburitsa ndaiita sendichaitevera mudenga nekunakirwa. Kana oidzosera ndainzwa kuti zhiii ichisvika kuchibereko chaiko. Akakwesha akweshazve mhata yangu , ziya rikaerera but hapana aida kuregedza. Ndakazonzwa yoita seyoreba nekufuta iri mukati ndikaziva kuti zvavekuda kuitika. Ndakasimudza makumbo ndikalocker muviri wake. Iye ndokupinner maoko angu kumasides emusoro vangu, zvigunwe zvedu zvakalocker. Hameno kuti aifunga kuti ndingatize mboro yainaka zvakadai. Akataura nekazeve zeve futi munzeve dzangu.